Kobcidda Is-gaarsiinta Tansaaniya oo ah tan ugu sarraysa Bariga Afrika - Sabahionline.com
Kobcidda Is-gaarsiinta Tansaaniya oo ah tan ugu sarraysa Bariga Afrika Abriil 26, 2012
Xaddiga kobcidda ee waaxda warfaafinta iyo Is-gaarsiinta Tansaaniya (ICT) ayaa ah tan ugu sarraysa Bariga Afrika, Wasiirka Is-gaarsiinta, Sayniska iyo Tiknoolojiyadda, Makame Mbarawa ayaa Arbacadii (25-ka April) sheegay. Qodobbo la xiriira
Hay’adda Kaymaha Tansaaniya oo dhaaftay dakhligii la filayey
Wasiirka oo uu ku xigeenkiisu isagoo ka wakiil ah khudbadiisa ka akhriyey kulan ku saabsan Is-gaarsiinta oo ka dhacayey Daaru Salaam, ayaa carrabka ku xajiyey in aqoonta iyo hindisiddu ay muhiim u yihiin koboca dhaqaalaha iyo dakhliga oo sare u kaca tobanka sano ee soo socota. Dawladda ayaa qorshaynaysa in ay gaadho celcelis wax-soo-saar gudaha ah oo sanadle ah oo uu xaddiga kobiciisu yahay 8% marka la gaaro 2015-ka. Koboca waaxda ICT ee Tansaaniya ayaa wuxuu haatan u dhexeeyaa 15% ilaa 25% sanadkii, ayuu yiri. Said Amir Said oo ah sarkaalka fulinta ee ugu sarreeya shirkadda la yiraahdo Tanzania Telecommunication Company, ayaa ku nuux-nuuxsaday muhiimadda ay leedahay tiknooloojiyadda dijitaalka ah. “Intan ka badan iskama sii dhega-marin karro kacaanka dhijitaalka ee haatanba dhacay ama dhici kara saamaynta uu ku yeelan karo horumarka dhaqaale iyo kan bulsho ee waddamadeenna kala duwan,” ayuu yiri. Muxuu kula yahay qoraalkan?